Shilkii Baabuur ee uu ku Dhintay Cabdullahi Dheere Waxaa uu Ahaa Mid la Soo Qorsheeyey. – Rasaasa News
Shilkii Baabuur ee uu ku Dhintay Cabdullahi Dheere Waxaa uu Ahaa Mid la Soo Qorsheeyey.
Dec 20, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, peace in ethiopia, peace in ogaden, Shilkii Baabuur ee uu ku Dhintay Cabdullahi Dheere Waxaa uu Ahaa Mid la Soo Qorsheeyey., somalia
Marxuun Cabdullahi Axmed Dhamac [Cabdullahi Dheer], oo maalintii Sabtiga ahayd ku ku dhintay Shil Baabuur, ayey warar soo baxayaa waxay sheegayaan in Cabdullahi dheer dhimashadiisu ay ahayd mid la soo qorsheeyey, oo uu ka dambeeyey Jwxo-shiil iyo rag ganacsato ah oo ay isku hayb yihiin. “Waysaaladuu dhigay iyadoo lala wareegaayo miyuu way tolayeey maantana dunidi waax gooyey.”
Marxuun Cabdulahi dheer, waxaa uu ahaa ganacsade degan dalka Kenya mudo dhawr iyo sodon sano ah, waxaana uu ku guulaystay in uu ka mid noqdo dadka Somalida ah raga ugu lacagata badan uguna magaca dheer. Cabdulahi dheer waxay xurguf looltan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo is huwan u dhaxaysay rag ay magac wadaagaan oo ay wada degan yihiin dalka Kenya oo iyagu taageera Jwxo-shiil.
Cabdullahi dheer waxaa uu ahaa dadka aaminsan nolol iyo horumar, waxaana uu aad uga soo horjeeday dagaalada ka socda gabalka Ogaden, dhulkaas oo ah halka uu asal ahaan ka soo jeeday, gaar ahaana gabalada Fiiq iyo Dhagaxbuur. Cabdullahi dheere waxaa uu socdaal ku tagay gabalka Somalida Ogadeeniya ka dib, heshiiskii nabadeed ee dhexmaray ururada ONLF, UWSLF iyo dawlada Itobiya,isaga oo aad ula dhacsan heshiiska nabada ee ka dhacay dhulka Somalida Ogadeeniya, si la mid ah sida ay u taageereen ganacsato badan oo u dhalatay gabalka somalida Ogadeeniya degana dalka Kenya.
Cabdullahi waxaa uu socdaalkiisu ku beegnaa xiligii uu Jwxo-shiil, 200 ee wiil u soo diray Itobiya si loo dilo. Cabdulahi kolkii uu yimid dawlad degaanka Somalida Waxaa la tusay 90 wiil oo ay isku reer yihiin oo ka mid ahaa 200 ee will ee uu Jwxo-shiil, soo diray kuwaas oo badankood la dilay.
Cabdulahi dheer waxaa uu waraystay wiilasha maxaabiista ah wax kaligood loo qabtay qaarna loo dilay waxayna u sheegeen in wax dagaalamaya ama dhimanaya in ay yihiin wiilal uu adeer u yahay oo kuligood miyaga laga kaxaystay. Cabdullahi dheer Eebe ha ha u naxariistee Xabsiga Jijiga ayuu oohin la fadhiistay, isaga oo aad uga cadhooday dhibaatada uu Jwxo-shiil, dhalinyarada beesha uu Cabdulahi ka dhashay ku hayo.
Cabdulahi Dheer waxaa uu booqday gabalka Fiiq iyo Dhagaxbuur, waxaana uu bilaabay in uu dadka u sheego in ay nabad qaataan oo ayna u ogolaanin in ay wiilshoodu si aan munaasab ahayn u dhintaan.
Cabdullahi, kolkii uu ku noqday Keyna waxaa uu shir u qabtay ganacsatada iyo wax garadka Somalida Ogadeeniya kolkii uu uga sheekeeyey dhibaatada dalka ka jirta, kuli waxaa la isku raacay in nabada laga shaqeeyo, kolka laga reebo laba nin oo ganacsato ah oo ay iskuhayb yihiin Jwxo-shiil. Labadaas nin oo ay aad isu afdhaafeen habeenkaas, laysuna dhaartay, in kasta oo kolkii dambe ay ku af gobaadsadeen in ay taageersan yihiin nabada.
Warar xaqiiq ah oo aan qarsoodi ahayn ayaanu ka helay Kenya oo sheegaya in dilka Cabdulahi dheer ay labadaas nin iyo Jwxo-shiil, isla go,aamiyeen habeen ka dib shirka uu Cabdulahi qabtay. Jwxo-shiil, waxaa uu ku dhaartay in Cabdulahi dheere uu aduunka dhaafin, haduu fursad u helo, labada ganacsade ayaa Jwxo-shiil, u sheegay in uu arinta iyaga u dhaafo madaama ay wax waliba ka suurto gal yihiin dalka Kenya.
Beesha uu Jwxo-shiil, ka soo jeedo iyo beesha Marxuun Cabdulahi dheere ayaa waxay wada degaan gabalka Dhagaxbuur, dhalinyarada uu hawlgaliyo Jwxo-shiil, ayaa u badnaa beesha Cabdulahi dheere si [khaldan] waxaana dhab ah in ololaha uu Cabdulahi dheere waday uu waxweyn ka badali lahaa nabada dhulka Somalida Ogadeeniya gaar ahaan gabalada Dhagaxbuur iyo Nogob.
In kasta oo ciidanka nabad galiyada wadooyinka ee Kenya ay wadaan baadhitaan ayna waxba ku helaynin, ayey hadana xogo aanu helayno ay sheegayaan in mar hore lacag la siiyey darawaliin, lalana socday dhaqdhaqaaqa Cabdullahi, kolkii la ogaaday in uu Cabdulahi dheere baxayna lala hadlay mid ka mid ah darawaliintii oo isagu xiligaas socdaal u soo ahaa Nairobi. Waxaana la siiyey taargada iyo nooca gaadhiga uu watay Cabdullahi dheere, sidaasi ayuuna marka uu ka horyimid loo dul mariyey.
Waxaana soo gudbin doonaa xogaha dheeraadka ah ee aan ka helo geerida Marxuun Cabdulahi dheere, oo aanu ku daba jiro, wixii xog ah ee aan ka helana waanu idiin soo gudbin doonaa.
Isbadalweyn oo Nabad Galiyo oo Laga Dareemayo Degaanka Somalida
Dadaalada Nabada Degaanka Somalida iyo Dabciyada New Police-ka